निषेधाज्ञामै घर डठ्याउने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी हुन सक्छन् विकल्प
२०७८ बैशाख, ३१
काठमाडौं । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण जारी निषेधाज्ञाले अहिले अधिकांश निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी निजी प्रयोजनका घर निर्माण करिब ठप्प अवस्थामा छ । कतिपय निर्माण मजदुर घरगाउँ फर्किइसकेका छन् भने सहरमा बसेका मजदुरहरू पनि कोरोना जोखिमका कारण निर्माण क्षेत्रमा जान सकेका छन् । स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता भएका कारण घर निर्माणका लागि अहिले उपयुक्त समय भने होइन । तथापि निर्माण जरुरी नै भएको खण्डमा यसको विकल्प भने छ ।
घर बनाउन सर्वप्रथम त नक्सा डिजाइन गरेर नगरपालिकाबाट पास गर्नुपर्छ । नक्सा पासपछि आवश्यक निर्माण सामग्री र श्रमिकको जोहो गरेर निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । तपाईंले कुनै निर्माण कम्पनीसँग सम्पर्क गरेर नक्सा डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको काम गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि तपाईंले उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
घर बनाउन सर्वप्रथम नक्साको काम गर्नुस् । घर निर्माणका लागि आर्किटेक्ट र सिभिल डिजाइन आवश्यक पर्छ । तपाईं आफूले बनाउन चाहेअनुसार आर्किटेक्ट इन्जिनियरद्वारा थ्रिडी आर्किटेक्ट र सिभिल इन्जिनियरद्वारा संरचनाको डिजाइन गराउन सक्नुहुन्छ । यसपछि तपाईंले नक्सा पासका लागि आवश्यक सरकारी कागजसहित नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यसमा तपाईंले निर्माण कम्पनीबाट पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ ।
नक्सा पासपछि बल्ल सुरु हुन्छ, निर्माणको काम । घर बनाउने चटारोसँगै निर्माण सामग्री किन्न जाने, ठेकेदार एवं श्रमिक खोज्ने झन्झट पनि एकातिर छँदै छ । तर, तपाईं यो झन्झट लिन चाहनुहुन्न भने यसका लागि सोझै घर निर्माणको काम गरिरहेका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दिन सकिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा केही कम्पनीले निषेधाज्ञाको समय पनि नक्सा पासदेखि आवश्यक निर्माण सामग्री र श्रमिक उपलब्ध गराइरहेका छन् । अशोका एन्ड कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अशोककुमार साह निषेधाज्ञामा पनि निजी आवास निर्माण धमाधम भइरहेको बताउँछन् ।
‘आवश्यकताअनुसार सिंगो निर्माणको जिम्मा पनि लिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘श्रमिक आवश्यक भएकालाई श्रमिक, निर्माण सामग्री मात्र आवश्यक भएकालाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छौं ।’ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएरै निर्माणको काम गरिरहेको उनले सुनाए ।
एनका अनुसार कम्पनीले उपभोक्ताले माग गरेअनुसार निर्माण सामग्रीसमेत होम डेलिभरी गरिदिन्छ भने मागअनुरूप श्रमिक पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ । निर्माण सुरु हुँदा आवश्यक सिमेन्ट, बालुवा, गिटी, रडलगायत सामग्रीदेखि सम्पन्न भएपछि घर डेकोरेट गर्न आवश्यक कुर्सी, टेबल, बेडलगायत सबै सामग्री उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
‘निर्माण सामग्री रिटेलमा भन्दा सस्तो डिलरकै मूल्यमा उपलब्ध गराइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञालगायत अन्य कारणले रोकिएको कामको जिम्मेवारी पनि हामीले लिने गरेका छौं ।’ निषेधाज्ञामा कम्पनीको वेबसाइटमार्फत सम्पर्कमा आएका काम गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।
घर डिजाइनमा थ्रीडीको प्रयोग[२०७८ जेठ, २८]
यसरी गर्नुस्, कार्नेसन फूलमा लाग्ने रोग किराको व्यवस्थापन[२०७८ जेठ, २८]
यसरी गर्न सकिन्छ घरमा सस्तो लागतमा फर्निचर व्यवस्थापन[२०७८ जेठ, २१]
यसरी गर्नुस् कार्नेसन फूल खेती[२०७८ जेठ, २१]
घरमा पानी लिकेज हुँदा भित्ता रसाएको छ ?[२०७८ जेठ, २१]